दही को समारोह संग Multivarka - युवा बच्चाहरु संग एक परिवारको लागि एक राम्रो समाधान
प्रारम्भिक XX सताब्दी को Mistress आधुनिक भान्सा आए भने, त्यो अझै ईर्ष्या को मर्ने। म एक राहत हाम्रो थप वैविध्यपूर्ण आहार थालेका छ रूपमा तिनीहरूले हामीलाई सुरक्षित कति समय हाम्रो भान्सा सहयोगीहरूले, दिइएको के हामी बस बुझ्दैनन् भन्न पर्छ। ती बेबदल सहायक को एक multivarka छ। यसलाई जो पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री एक पैन मा व्यञ्जन विभिन्न पकाउन गर्न अनुमति दिन्छ आधुनिक मिसिन छ। साथै, केही प्रजाति थप विकल्पहरू छन्। उदाहरणका लागि, त्यहाँ multivarka दही समारोह संग, यो मात्र होइन परम्परागत पकाउने मोड, frying, sautéing र पाक सामेल छ, तर पनि यो घरमा प्रत्यक्ष दही पकाउन गर्न सम्भव बनाउँछ।
दही - यो के हो? यो एक घर उपकरण, एक निश्चित तापमान (37 42 डिग्री देखि लिएर) को दही किण्व | | खमीर भाग thermophilic जीवाणुहरु को विकास को लागि आवश्यक कायम गर्न अभिप्रेरित छ। किरा जसको नम्बर उपकरण नै को आकार मा निर्भर गर्दछ portioned एक जार, समावेश छन्। साना बच्चाहरु संग एक परिवार मा कुरा, यो आवश्यक छ। तथ्यलाई उच्च गुणस्तरीय दही जारी एकाइ निर्माता। तसर्थ, जो चाहनुहुन्छ ती प्रत्याभूति गर्न एक उपयोगी किण्वित दूध उत्पादन आफैलाई गर्नुपर्छ। तयारीको प्रविधि सरल छ। दूध स्टार्टर (तिनीहरूले प्रत्येक प्रजाति यसको आफ्नै निर्देशन छ, फरक छन्) थपिएको छ। त्यसपछि जार सबै हालिएको र दही राख्नुभयो। त्यहाँ एक उत्पादन 4-5 घण्टा पछि बिताउनुहुन्छ
त्यसपछि यो "परिपक्वता" को लागि 10-12 घण्टा फ्रिज मा राखिएको हुनुपर्छ। यो समय पछि, प्रत्यक्ष किण्वित दूध उत्पादन तयार छ! दही समारोह संग Multivarka एक उपकरण मा दुई जोडती। यो एकदम शहर अपार्टमेन्ट, spaciousness फरक गर्दैन मा भान्सा मा स्थान सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
multivarka-दही कस्तो हुनुपर्छ? यो मात्रा ध्यान आवश्यक छ। तपाईं एक परिवार4वा बढी व्यक्ति हुन्छन् छ भने, तपाईं 2-2.5 लिटर को प्रतिहरू प्राप्त गर्न सक्दैन, यो 5-लीटर मा हेर्न आवश्यक छ। दही र रोटी मिसिन को समारोह त्यहाँ multivarka। पहिलो नजर मा - धेरै राम्रो, तर हामी, एकाइ कम विश्वसनीय छ थप कार्यहरु कि सम्झना गर्नुपर्छ। तपाईं सुविधाहरू सबैभन्दा आवश्यक छन् के निर्णय गर्नुपर्छ, र स्टप मा। ठीक छ, उपकरण बाफ जारी को एक प्रणाली संग सुसज्जित छ भने यस्तो दबाब आफूलाई नियन्त्रण गर्नेछ। Desirably, को हत्येदार बरतन नै एक चीनी माटो वा Teflon कोटिंग थियो। त्यहाँ जो प्रत्येक उत्पादनको लागि सेटिङ चयन गर्न सक्नुहुन्छ एकाइहरु छन्। तपाईं अक्सर सिमी पकाउन भने, soaking को संभावना रोक्दैन। कसैलाई ढिलाइ संग एक घडी सुरु रुचि हुन सक्छ। र, को पाठ्यक्रम, धेरै आवश्यक कार्य गरम खाना जस्ता। यो सबै एक उपकरण मा उपस्थित हुन सक्छ, यो संयोजन गर्न सम्भव छ।
अब तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं Multivarki लागि व्यञ्जनहरु को एक महान विविधता पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले रचनात्मकता लागि स्कोप असीमित छ। तपाईंले यो समस्या गम्भीर दृष्टिकोण भने, दही को समारोह संग multivarka एक लामो समय को लागि सेवा, र तपाईं सधैं प्रियजनहरूलाई पाक प्रसन्न तुल्याउन सक्षम हुनेछ।
Lupa binocular: मापदण्डहरू, प्रकार र प्रयोग को सुविधाहरू
तातो खुट्टा स्नान - प्रतिस्थापन सैलून उपचार
कपडा मन्दिर: म किन चाहिन्छ, कसरी पोशाक गर्न कसरी बाँध गर्न
को टब के हो र यो खेत मा उपयोगी छ कसरी
एक बगैचा फोहरा स्थापना
कसरी सही छनौट गर्न: बच्चाहरु को लागि कार सिट
भान्सा कुरा मा अपरिहार्य - Steamer TEFAL
जीवनी Kadyshevo आशा र सफलता उनको तरिका
मास्टर वर्ग: आफ्नो हातमा स्क्रिन। रेखाचित्र, निर्देशन
सलयाया ग्रैंड होटल र रिसोर्ट4* (सुडैक, क्रिमिया): वर्णन, सुविधाहरू, समीक्षाहरू
तेल को घनत्व र यसको शारीरिक गुण
सही रूपमा लिखित र स्पष्टीकरणको स्पष्ट समापन पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाषण र उच्च स्तरको साक्षरता हो
Blackheads को मास्क
Buerger रोग, यसको मूल, लक्षण र उपचार
गियरबक्सलाई को डिजाइन। विभिन्न विकल्पहरू
उबला सेम: क्यालोरी। क्यान्ड सिमी क्यालोरी। क्यालोरी पकाएको रातो सिमी
उद्धरण जीवन कसरी उपयोगी।